Avy Amin’ny Fanahy Masina ve ny Baiboly?
MINO ve ianao fa avy amin’Andriamanitra ny Baiboly? Sa ianao mihevitra fa hevitr’olombelona fotsiny no ao?
Samy manana ny heviny na dia ireo mitonona ho Kristianina aza. Nisy fitsapan-kevitra natao, ohatra, tany Etazonia tamin’ny 2014. Hita tamin’izay fa mino ny ankamaroan’izy ireo hoe “misy ifandraisany amin’Andriamanitra ihany ny Baiboly.” Tokotokony ho 1 tao anatin’ny 5 anefa no nilaza fa “angano sy tantara fahiny ary fitsipik’olombelona” fotsiny no hita ao. Raha izany no izy, inona no tena dikan’ilay hoe ‘avy amin’ny herin’ny fanahy masina’ ny Baiboly?—2 Timoty 3:16.
‘AVY AMIN’NY HERIN’NY FANAHY MASINA’
Misy bokikely 66 ao amin’ny Baiboly, ary olona 40 teo ho eo no nanoratra azy io nandritra ny 1 600 taona teo ho eo. Nahoana anefa izy io no lazaina fa “avy amin’ny herin’ny fanahy masin’Andriamanitra”? Satria avy amin’Andriamanitra ny fanazavana raketiny. Hoy ny 2 Petera 1:21: ‘Avy tamin’Andriamanitra no nitenenan’ny olona, araka izay nitarihan’ny fanahy masina azy.’ Nampiasa ny heriny na ny fanahiny masina àry Andriamanitra mba hampitana ny hafany tamin’ireo mpanoratra ny Baiboly. Hoatran’ny direktera iray mampanoratra taratasy ny sekreterany izany. Ilay direktera no tena tompon-kevitra, fa manoratra fotsiny ilay sekretera.
Nisy mpanoratra Baiboly nahare hafatra avy tamin’Andriamanitra, satria nampiasa anjely izy mba hampitana izany. Ny hafa indray nomen’Andriamanitra fahitana. Nahazo hafatra tamin’ny alalan’ny nofy kosa ny sasany. Nisy fotoana navelan’Andriamanitra hifidy an’izay teny hampiasainy ny mpanoratra, fa indraindray notononiny tamin’izy ireo mihitsy izay hosoratana. Na ahoana na ahoana anefa, dia ny hevitr’Andriamanitra no nampitain’izy ireo fa tsy ny azy.
Nahoana no azontsika antoka hoe Andriamanitra no nampanoratra ny Baiboly? Diniho ireo porofo telo manamarina an’izany.
Tena Tenin’Andriamanitra ny Baiboly
Hizara Hizara Avy Amin’ny Fanahy Masina ve ny Baiboly?